Ngo-2008: Unyaka weMicro | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 26, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Lo ibingunyaka onika umdla kwitekhnoloji ye-Intanethi. Ukuba uyijonga ngokwembono yeenyawo ezingama-10,000, abantu basatshisa umkhondo ngendlela yokusebenzisa esi sixhobo sitsha, i-Intanethi. Mhlawumbi iyacaca kodwa ndiyakholelwa ukuba unyaka ka-2008 ngunyaka wokuba izicelo nezicwangciso zihambe Micro.
Ukuvela kwewebhu yoluntu (i-Web 2.0) ngoku ihamba ngokukhawuleza iye kwindawo entsha, ekujoliswe kuyo. Esona sisombululo sikhulu, esilingana nesinye, siya kuguquka ukuze sikunike unxibelelwano olufanelekileyo kubantu abalungileyo kunye nomxholo ofanelekileyo… ngexesha elifanelekileyo.
I-imeyile igqithisile kusetyenziso oluqhelekileyo lwee-eNewsletter kwaye iya isomelela kwihlabathi lokuthengiselana. Endaweni yokubonelela 'ngomnyhadala' we-imeyile oyithumelayo ngoku ibangelwe njengenxalenye yesicwangciso-nkqubo sentengiso ngokubanzi ukugcina abasebenzisi kunye nokugcina bexhunyiwe kwintengiso yabo, kwinethiwekhi yabo, kwiibhlog abazifundileyo, njl.
I-imeyile ikwavela, ngaphandle kwemida yoku abaxhasi be-imeyile. Imeyile ihamba kancinci… imiyalezo efike ngexesha, ulawulo ngakumbi kunye nokuqhutywa komsitho.
Ukubhloga kuye kwahamba neMicrosoft Twitter, Jaiku kunye nePownce. Iziqwengana ezikhawulezayo ezenza incoko ebonakalayo ukusuka kwenye ukuya kwezininzi.
Iinkampani sele ziqala ukusebenzisa iMicroblogging, kodwa siza kubona ukusetyenziswa kweentengiso zeMicroblogging ngo-2008. Siza kubona amaqela alunge ngakumbi kubhloga kweMicro… kufana namagumbi okuncokola aguquke kwizicelo zencoko zoluntu kwiminyaka elishumi eyadlulayo.
IiNethiwekhi zeNtlalo ziyahamba zisuka kwizicwangciso ze-monolithic Facebook, MySpace, LinkedIn kwaye UPlaxo… Kwaye usiya kuthungelwano oluncinci lwentlalo lwe Ning (Qaphela: IncinciIndiana, IiVets, Ukuthengisa kwezemidlalo 2.0, IndyLance Zimbalwa endiziqalileyo okanye ndibandakanyeke kuzo!).
Iindawo zokubhukisha ezinje nge Digg zilahlwa kwiindawo ezinje Umxubex - apho ungacwangcisa khona amaqela amaMicrosoft ukuze ujoyine. Ndingakhuthaza wonke umntu ofunda ibhlog yam ukuba anxibelelane nam ngesimemo seQela lokuThengisa kwi-Intanethi ukuze sabelane ngezixhumanisi. Ezinye izicelo ezinje ngeTruemors ziya kuqhubeka nokuvela ngokujolisa kokujolisa kunokuba nakho ukukhetha kwangaphambili.
IiNkqubo zoLwazi lweJografi ezikwi-Intanethi zixhotyiswa ngakumbi nangakumbi ukuya kumgangatho omncinci. Uphando, Yahoo, yaye Microsoft qhubeka nokwandisa idatha yengingqi yophando oluphuculweyo lweJografi. UGoogle uyayixhasa I-KML kwiindawo zokuhlala, Ukuchonga ngokwendawo kunye nokufaka isalathiso kwiiwebhusayithi zakho!
Ividiyo iya eMicro (iposti ihlaziyiwe kunye nengcebiso evela kwingcaciso kaNil eScobleizer). Utterz, Ingqondo kwaye QIK. Ividiyo kunye nobuchwephesha beefowuni eziphathwayo ziyahlangana, zenza ukuba abantu barekhode kwaye bafake ividiyo ngokulula ngakumbi ngomgangatho ongcono!
Isoftware njengeZicelo zeNkonzo ziya kuqhubeka nokucinezelwa ukuba zibhetyebhetye ngokwaneleyo ukuba zenze uphawu kunye nokudityaniswa kwezinye usetyenziso okanye ezinye iimveliso. Akukho sicelo 'senkonxi' silungile ngokwaneleyo ukuba singathenga kwaye sibeke, kufuneka sisebenzise ubuchwephesha beCSS ukuguqula usetyenziso lwethu luye nakweyiphi na imeko. Kuya kufuneka sakhe izicelo ezikwaziyo ukuhlengahlengiswa kwiinkcukacha ezincinci (ezincinci).
Apho unayo, ukuqikelela kwam ngo-2008-unyaka wesicwangciso esincinci kunye nesicelo seshishini elincinci. Ukukwazi ukwenza ezifana amaqela, usetyenziso lweendawo ezikuzo, ii-SaaS ezinophawu oluncinci, okanye amaqela alula entlalontle aya kuxhamla ngokupheleleyo ngo-2008. Abo bangazukuziqhelanisa baya kulityalwa.
tags: 2008uphawu lokubhukishaInkqubo yolwazi ngokwendawoGISiimephuI-2008 yokuthengisamicroImidiya yokuncokolazokunxibelelanaisoftware njengenkonzo
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2007 ngo-2: 47 AM
Iqela lakho leMixx alivulelekanga kubabhalisi bakho. Ndicofe kwikhonkco lakho ukujoyina kwaye ndinomyalezo:
“Yhu! Kukho into engalunganga.
I-Pssst: Khange umenywe kweli qela okwangoku, ke hayi, awungekhe uyenze loo nto. Kodwa buza kakuhle mhlawumbi baya kukungenisa ngaphakathi. Okanye qala iqela lakho! ”
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2007 ngo-9: 35 AM
Ngelishwa, uMixx akaboneleli 'ngamaqela avulekileyo' (ngokokwazi kwam!). Ukuba ungathanda, sebenzisa ifom yam yoqhakamshelwano kwaye undithumelele idilesi ye-imeyile kwaye ndiza kukuphosa isimemo!
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2007 ngo-5: 49 AM
Kuvakala ngathi 'zii-mediasnacks' macala onke 😉
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2007 ngo-10: 33 AM
Ukuba yonke into ihamba ngenene, kwaye kuya kufuneka ndivume ukuba into oyithethayo iyinyani emva koko siya kuba yinxalenye yeencoko ezincinci, ngokungathi ukwitheko elikhulu kwaye uthetha nabantu aba-5 okanye abali-10 ubusuku bonke.
Ekugqibeleni siya kuyidinga kakhulu indlela yokufumana malunga nala maqela njengaye wonke umntu ngandlel 'ithile wafumanisa malunga ne-Facebook kulo nyaka.
Enye yeengxaki endizibonileyo kwaye ndizamile ukuzigcina kulo nyaka ibe lutshintsho olukhulu kwaye bekunzima kangakanani ukuqhubeka. Ndifumanise ukuba ndifunda ngetekhnoloji entsha kubantu abanjengoScoble ngokufunda iRSS feed kumfundi wam kaGoogle kodwa kulula kakhulu ukuba itekhnoloji enkulu iphoswe ngaphandle kokuba umntu ngaphandle kweArrington asincede siqhubeke noko kufuneka sikubukele.
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2007 ngo-12: 52 PM
Hayi, enkosi ndoda ngokukhankanywa. Akukho ndlela endandifuna ukunciphisa ixabiso leposi yakho uyazi. Unyanisile ngemali ngokokubona kwam. Mhlawumbi into ehloniphekileyo ibiya kuba kukuphawula apha kuqala, nangona oko kunokuba "kukungena" mhlawumbi. Ndonwabile ukufunda iposti yakho nangona. Masinwabe.
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2007 ngo-2: 52 PM
Akukho xhala, Nil! Uzise inqaku elikhulu. Ndothukile kwividiyo ndide ndifunde ingxelo-kwaye ubunyanisile!
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2007 ngo-3: 46 PM
Enye yezinto ebisoloko ibhenela kum kubuchwephesha nakwimithombo yeendaba ezintsha kukukwazi ukwenza izinto phezulu kunye nokwenza izinto ezintsha, ezinomdla (Uxolo, awunakucinga ngegama elingcono kunelo ngoku.) Kodwa okuninzi koku Izinto ziba zi-ad hoc ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba kuphela bambalwa abakhanyiselweyo abakwaziyo malunga nobukho bayo. Ndicinga ngakumbi ngezinto ezinjengee-hashtag kwi-Twitter. Ukuze konke oku kuhamba kancinci kwenziwe impembelelo, kufuneka kubekho uhlobo oluthile lomthi womthi osasaza iindaba kubantu abatsha kuba - masijongane nayo-bambalwa kakhulu abantu abaziyo ukuba yintoni i-RSS, kungasathethwa ke ukuba babhalise. kuko konke ukutya okubalulekileyo kwaye uhlunge kuko konke.
Okokugqibela, imbambano yam kukuba uninzi lwamathuba okuthengisa abantu abawabona kwi-microblogging kunye nakwimithombo yeendaba ehambayo kwaye zonke ezinye zona ziluhlobo ngqo lwezinto abantu abanjengam abaza kukhwaza ukuba babalekele kuzo. Andiphikisani nembono nganye kodwa kuya kufuneka-kwaye kunyanzelekile-kucace, iindlela ezilula zokulawula nokulawula ukuba la mava anjani kum. Ndicinga ukuba iprojekthi efana ne-OAuth kunye ne-OpenID ihamba umgama omde kuququzelelo lolu hlobo lwento kodwa ndicinga ukuba usemninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe ukukhusela abantu. Njengoko umhlaba uhamba umncinci, indawo abathengisi bayo abahlaselayo iya isiba yeyakho buqu. Kwaye andiyithathi ngobubele into yokuba kungene indawo yam yobuqu. Ukuba ndiyakumema ungene, kulungile. Kodwa ke ukuba ndiyakucela ukuba uhambe, phuma okanye ndiza kukukhupha.
Yiyo kuphela i- $ .02 yam.
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2007 ngo-5: 14 PM
Ubuncinci i-nickel ixabisa, uJamie 😉
Ndicinga ukuba ubethelele izinto ezimbini… okokuqala ukuba itekhnoloji iyavela kwaye indaleko yinto elungileyo. Inqaku lesibini olenzayo yile nto kanye le nto sifuna ukuba siphakathi. Ukuba ndinemveliso okanye inkonzo onomdla kuyo, ungavuya ukufumana malunga nayo (ngamagama akho) njengoko undimemile.
Ukufumana itekhnoloji ezisa imveliso okanye inkonzo kulowo ukhangeleyo okanye iimfuno loo mveliso okanye inkonzo yile nto siyilandeleyo. Into yokugqibela endifuna ukuyenza a) ukuchitha imali yam kwintengiso engafikeleli kumntu olungileyo kwaye b) abantu abanomsindo njengawe ngokubeka ebusweni bakho xa ungakhange ubufune.
Ndonwabile malunga nendaleko yetekhnoloji eya kuqhubeka nokuzisa indawo yentengiso kunye! Ndiyathemba ukuba asinamsindo kubantu abanjengawe ngelixa siyiqonda. 🙂
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2007 ngo-2: 43 AM
Ngalo lonke ulwazi olufumanekayo kwiwebhu, kuya kufuneka sihluze ukuze sikwazi ukuqonda. Enye yeendlela ezilungileyo zokucoca ulwelo kukuniche okanye ngamanye amagama ukwenza indawo encinci okanye ingxelo yolwazi. Ndiyavumelana ngokupheleleyo noqikelelo lwakho.
Ngomhla wama-31 ku-Disemba 2007 ngo-5: 11 AM
Enkosi ngale posi. Ndiyavuma ukuba iMicro inamandla. Ngoba? Kuba kulula ukuyenza. Abantu abalindelanga ukuba ubhale ibali eliphezulu ngesiqalo esihle, esiphakathi kunye nesiphelo. Kwaye kulula ukuyidla, ngcono: 'khangela'. Masinwabe.
Bendizibuza ukuba ukhona umntu onokundinceda. Ndijonge owona mcimbi mkhulu wakutshanje kwintengiso enxulumene netekhnoloji… naziphi na iingcebiso ziya kuthakazelelwa kakhulu… cheers !!!